65% Polyester 35% Indwangu Yekotini
80% Polyester 20% Indwangu Yekotini
90% Polyester 10% Indwangu Yekotini
Indwangu Egqokwa Yendwangu Yeyunifomu
Iyini indwangu ye-Twill?
Isikhathi sokuthumela: Jul-06-2020
Imichilo ye-warp ne-weft iboshelwe okungenani kanye, kuthi lapho izindonga zezinqe kanye nokwemba ziguqulwe ukuze ziguqule isakhiwo sendwangu futhi ngokubizwa kwazo kuthiwa yinsimbi ye-twill. Isakhiwo sendwangu singama-twill amabili aphezulu kanye no-45 ° wendwangu eyisobunxele, iphethini le-twill yangaphambili licacile ...Funda kabanzi »
Izindwangu Zendwangu Ephelele Yezokwelapha
Kunezingqimba ezi-2 kule ndwangu yezokwelapha ye-TPU. Owokuqala yindwangu eyisisekelo. Indwangu engeyona eyokweluka. Ingqimba engezansi ifilimu ye-TPU. Kwenza indwangu ukuthi ingabi nomoya futhi ingangeni manzi. Ingqimba ye-TPU ethambile nenwebekayo ingakhuphula amandla okugqekeza futhi aluhlaza entweni. Izici:Funda kabanzi »
Ngo-Ephreli 10, inkampani yethu yaya eVietnam ukuzobamba iqhaza kulo mbukiso, yabonisa imikhiqizo ephambili yenkampani yethu: indwangu ephaketheni, Indwangu Yezokwelapha, indwangu yokugqoka, yanikeza amakhasimende ukubonisa okuningiliziwe kwemikhiqizo yenkampani namandla eNkampani. Hebei Ruimian Textile Co, Ltd ...Funda kabanzi »
I-Hebei Ruimian Textile Trading Co, Ltd
Ifeksi: 0086- (0) 311-67501546
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu noma nge-pricelist, sicela ushiye i-imeyili yakho futhi sizoxhumana kungakapheli amahora angama-24.
Imichilo ye-warp ne-weft iboshelwe okungenani kanye, kuthi lapho izindonga zezinqe kanye nokwemba ziguqulwe ukuze ziguqule isakhiwo sendwangu futhi ngokubizwa kwazo kuthiwa yinsimbi ye-twill. Ukwakheka kwendwangu kukabili ...
Kunezingqimba ezi-2 kule ndwangu yezokwelapha ye-TPU. Owokuqala yindwangu eyisisekelo. Indwangu engeyona eyokweluka. Ingqimba engezansi ifilimu ye-TPU. Kwenza indwangu ukuthi ingabi nomoya futhi ingangeni manzi. Isendlalelo se-TPU esithambile nesinamathelayo ...
Ngo-Ephreli 10, inkampani yethu yaya eVietnam ukuzobamba iqhaza kulo mbukiso, yabonisa imikhiqizo eyinhloko yenkampani yethu: indwangu ephaketheni, Indwangu Yezokwelapha, indwangu yokugqoka, yanikeza amakhasimende imininingwane ebonakalayo yomngane ...